Kungani ngingakwazi ukufinyelela amaphosti? – HC - Zulu
HC - Zulu
Kungani ngingakwazi ukufinyelela amaphosti?
Enye yezinzuzo zokuba yilungu lomsunguli ukuthola okusunguliwe okukhethekile ngamaphosti. Uma uyilungu kodwa ungakwazi ukufinyelela amaphosti, kunezinto ezimbalwa ongazihlola ukuze uxazulule izinkinga ezingaba khona.
Kulesi sihloko, sizokhuluma ngokulandelayo:
Ukuhlola ukuthi yimaphi amabanga akwazi ukungena ephostini
Ukuqinisekisa isteyithasi sakho sokukhokha
Ukuqinisekisa imininingwane yakho yokuba yilungu
Ukufinyelela okusunguliwe ngaphandle kwe-Patreon
Ufinyelela amaphosti kuma-imeyili wakho? Amalinki amaphosti kuma-imeyili azokunikeza ukungena kanye ngaphandle kokuthi ungene ku-akhawunti. Uma uphinde ulandela ilinki evela ku-imeyili yakho, ungase udinge ukungena ku-akhawunti ukuze ubuke iphosti.
Hlola ukuthi yimaphi amabanga akwazi ukungena ephostini
Uma iphosti ikhiyiwe, chofoza i-ayikhoni ethi Kukhiyiwe ukuze uhlole ukuthi yimaphi amabanga akwazi ukungena. Lena yindlela esheshayo futhi elula yokuqinisekisa ukuthi kufanele ukwazi yini ukungena kuphosti noma cha. Uma ibanga lakho lingafakwanga, umsunguli akazange alifake ibanga lakho lapho eshicilela iphosti.
Uma ibanga lakho lifakiwe, kodwa namanje awunayo imvume yokungena, sicela uqhubeke ufunda okunye okungase kulungise inkinga.
Qinisekisa isteyithasi sakho sokukhokha
Ngokuzenzakalelayo, sikhiya amaphosti omsunguli lapho ukukhokha kwelungu kwenqantshwa. Ungakwazi ukuhlola umlando wakho wokukhokha ukuze uqinisekise ukuthi yonke into ingeyakamuva.
Nayi indlela yokuqinisekisa isteyithasi sakho sokukhokha:
Hamba phezu kwe-avatha yephrofayili yakho bese uchofoza okuthi Lawula ukuba yilungu
Ngemva kwalokho chofoza kuthebhu ethi Umlando Wezindleko
Skrola umlando wakho wokukhokha odlule — uma uqaphela noma yiziphi izindleko ezenqatshiwe, ungachofoza inkinobho ethi Zama futhi bese ulandela izinyathelo ezidingekayo ukuze uzame kabusha inkokhelo
Uma udinga noma yiluphi usizo lokuzama kabusha inkokhelo enqatshiwe, sicela ubheke kulezi ziqondiso zosizo: Zama kabusha inkokhelo yami (yenqaba)
Qinisekisa imininingwane yakho yokuba yilungu
Abasunguli bangahlukanisa ukufinyelelwa kwephosti ngokusekelwe emabangeni abo. Lokho kusho ukuthi ungaba sesigabeni esiphezulu somsunguli futhi uhlangabezane nephosti ongeke ukwazi ukuyifinyelela. Ungakwazi ukuhlola imininingwane yakho yokuba yilungu ukuze uqinisekise ibanga lakho nezinga lalokho okwazi ukukufinyelela.
Indlela yokuhlola imininingwane yakho yokuba yilungu:
Thola umsunguli bese uchofoza ilinki ethi Lungisa
Igama lebanga lakho lizobhalwa engxenyeni ethi Isifinyezo
Kusukela lapha, ungachofoza ilinki ethi Lungisa uma (ewu!) usesigabeni esingafanele
Uma uthola ukuthi ukuba yilungu kwakho kufakwe Njengesibophezelo esiqokiwe, kusho ukuthi okwamanje awukho ebangeni — chofoza okuthi Lungisa ukuze ujoyine elinye lamabanga omsunguli bese uvula ukungena
Uma uthuthela esigabeni esinezindleko ezifanayo nalezo osuzikhokhile kakade kule nyanga, ungakhathazeki, isibophezelo sakho samanje sizoya esibophezelweni ngaphandle kokukhokha imali eyengeziwe.
Ingabe usanda kukhansela?
Uma ukuba yilungu kwakho kukhokhiswe kusengaphambili futhi usanda kukhansela, uzokwazi ukungena kuphosti engxenyeni yenyanga esele (isib., uma ukhansela ngomhla ka-Jan 15, uzokwazi ukungena kuze kube ngu-Jan 31).
Uma ukuba yilungu kwakho bekungokwenyanga ngayinye (okungakhokhiswa kusengaphambili), noma kungokusunguliwe ngakunye, uzolahlekelwa ukufinyelela emaphostini lapho ukhansela. Ungafunda kabanzi mayelana nokuthi yini ongayilindela lapho ukhansela lapha: Kwenzekani lapho ngikhansela?
Sinezinhlobo ezihlukahlukene zalokho okungakhethwa ukuze abasunguli babelane ngamaphodikhasti wabo, amavidiyo, kanye nezithombe namalungu. Noma kunjalo, siyaqonda ukuthi abasunguli abaningi bakhetha ukugcina okusunguliwe kwabo kukhethekile esayithini abayiphethe ngaphandle kwe-Patreon.
Uma uzithola uvaleleke ngaphandle kokusunguliwe lokho ukuba yilungu okufanele kukunikeze kona, futhi ulubhekile uhlu lokuhlola olukulesi sihloko, thinta umsunguli ukuze uthole izinyathelo ezilandelayo zokuthola kabusha ukungena kwakho.
Kuthiwani uma ngiqhubeka ngingakwazi ukufinyelela amaphosti?
Uma iphosti ikhiyiwe ebangeni lakho, kodwa ukholelwa ukuthi kufanele ukwazi ukuyifinyelela, sicela wazise umsunguli wakho. Uzokwazi kabanzi mayelana nokuthi yimaphi amaphosti okufanele ukwazi ukufinyelela kuwo futhi angalungisa izinkinga zokungena kumaphosti uma kunephutha.
Kungani inani lami lenkokhelo lingayivuli yonke into?
Umsunguli ngamunye unendlela ehlukile aqhuba ngayo ukuba yilungu. Abasunguli bangasetha ukufinyelelwa kwephosti ngezindlela ezilandelayo:
Uwonk'uwonke: Isipho esivela kubasunguli esiya emhlabeni! Lawa maphosti atholakalela wonke umuntu.
Wonke amalungu: Wonke amalungu omsunguli azokwazi ukubuka okusunguliwe kwephosti — ngisho nabantu abanesibophezelo esiqokiwe
Amabanga akhethiwe: Abasunguli bangakwazi ukukhetha amabanga athile azokwazi ukungena ephostini. Lokhu kusho ukuthi noma ngabe usebangeni eliphezulu, ungase ungakwazi ukungena kokusunguliwe kwephosti. Funda incazelo yebanga lakho ukuze uthole ulwazi olwengeziwe olumayelana nokungena okulindelekile emaphostini. Uma ungaqiniseki, ukuthumela umsunguli wakho inothi elisheshayo ucela ukucaciselwa kungacacisa izinto.
Bengicabanga ukuthi amabanga aphezulu akwazi ukungena kuyo yonke into amabanga aphansi anayo?
Khuluma nomsunguli wakho uma ibanga lakho libonisa ukungena ezinzuzweni zawo wonke amabanga aphansi. Iphosti oyikhiyelwe kungenzeka ayihlobene nezinzuzo (njengesicelo sokuthuthukisa). Kungase kube into engalungiseka kalula noma kube ukushintsha isakhiwo sebanga.
Kwenzeka kanjani ukuthi ngikhokhela imali yenkokhelo, kodwa angikho kulelo banga?
Sivumela amalungu akhethe okuthi Khetha lokho okukhokhayo ezingeni ngalinye lebanga. Ungakwazi njalo ukunikeza okungaphezu kwezindleko zebanga lakho ngisho noma ungafuni ukujoyina ibanga eliphakeme.
Situsa ukuthi uthuthukise ibanga futhi hhayi inani lenkokhelo nje kuphela lapho ukhuphula ukuba kwakho yilungu. Ukukhuphula inani olikhokhayo ngeke kuvule okusunguliwe kwephosti okusha uma ungakhethi ibanga eliphakeme.